Finder တွင်အမှိုက်များမရှိပဲအမှိုက်ပုံးကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလဲ ငါက Mac ကပါ
OS X (သို့မဟုတ်မည်သည့် operating system) တွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ပေါ်တွင်အမှိုက်ပုံးထဲရှိကျွန်ုပ်တို့မှစာရွက်စာတမ်းများကိုဖျက်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ အပြင်၌ဤလုပ်ဆောင်ချက် Mac သန့်ရှင်းရေးကိုထားခြင်းကနေရာလွတ်ကိုရရှိစေသည် download လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်တွဲထဲကဖိုင်တွေကိုဖျက်လိုက်တာနဲ့တူတယ်။
OS X El Capitan အတွက်အက်ပဲလ်သည် Finder ၏အကြိုက်များမှအမှိုက်သရိုက်ကင်းလွတ်စွာဖယ်ရှားရန်ရွေးစရာကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Pedro Rodas လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့သောကြောင့်မူရင်း OS X El Capitan တွင်ဤတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ရက်ပေါင်း။ Apple ကဒီ option ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီ System Preferences မှတိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင်၎င်းသည်၎င်းကိုမလိုအပ်တော့ကြောင်းရှင်းပြပြီး၊ Mac ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်သည့်အခါစနစ်ကိုယ်တိုင်က၎င်းတို့အားပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသော်လည်း၊ Terminal မှ။ အမှိုက်ပုံးကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာမှုတ်ထုတ်သည့်အခါ Terminal မှပင်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤကိစ္စတွင် Apple ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ထွက်ခွာသွားသောရွေးချယ်စရာများကိုတွေ့လိမ့်မည်။
1 ဘာလို့ Apple ကဒီရွေးစရာကို OS X El Capitan မှာဖယ်ထုတ်ခဲ့တာလဲ။
2.1 Keyboard command များ
ဘာလို့ Apple ကဒီရွေးစရာကို OS X El Capitan မှာဖယ်ထုတ်ခဲ့တာလဲ။
ကောင်းပြီ၊ ဒီကိစ္စကမင်းတို့ကိုများများမေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပြီး၊ မူအရရိုးရှင်းတဲ့အဖြေရှိတယ်။ အကယ်၍ အမှားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းကိစ္စတွင် Apple သည် OS X အသစ်တွင်ရရှိနိုင်သောရွေးစရာကိုစွန့်ခွာသွားနိုင်သည်ဆိုပါကမူအမှားအားလုံခြုံစွာဖျက်ပစ်လျှင်၎င်းသည်စနစ်သို့မဟုတ်၎င်း၏စက်ပစ္စည်းများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပုံမပေါ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် အကယ်၍ ၎င်းသည် Mac အပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်လျှင်။
ဘလော့ဂ်ဖတ်ရှုသူ (အဲလ်ဘတ်တို) သူက၏မှတ်ချက်များအတွက်perfectlyုံကရှင်းပြသည် Pedro ရဲ့ဆောင်းပါး ဒါကြောင့်ငါကအောက်မှာကူးယူ:
လုံခြုံစိတ်ချရသောဖျက်ခြင်းတွင်ဖိုင်တစ်ချိန်ကသို့မဟုတ်အကြိမ်ကြိမ်ရှိသည့်နေရာကိုပြန်လည်ရေးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပိတ်ဆို့မှုတစ်ခုချင်းစီကိုပထမဆုံးဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ဖျက်ခြင်း / ရေးခြင်းဖြစ်သည့် SSD disk များ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်လုံးဝမကိုက်ညီပါ။ SSD ဖြင့်လုံခြုံသောဖျက်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည် drive ၏သက်တမ်းကိုများစွာတိုစေလိမ့်မည်။
တစ်ချိန်ကလူသိများသည် အက်ပဲလ်ကဒီရွေးစရာကို OS X El Capitan မှာဖယ်ရှားရတဲ့အကြောင်းရင်း အမှိုက်ပုံးထဲမှဖိုင်များကိုဖျက်ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောရွေးစရာများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။ အမှိုက်ပုံးထဲမှ mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ် trackpad ၏လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းဖြင့်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ပါ ၀ င်သည့်အရာများကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စတင်ခြင်းဖြင့်စတင်မည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ငါတို့သည်လည်းအမှိုက်ထဲသို့ဝင်နိုင်ပါတယ် ဖျက်ပစ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ, ဒါပေမယ့်သင်ဟာ keyboard command ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးပိုမိုမြန်ဆန်နိူင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုကြည့်ရအောင်။
Keyboard command များ
Command များနှင့်စတင်ပြီးသင် OS X ကိုအချိန်အတန်ကြာအသုံးပြုနေပြီဆိုလျှင်သင်သိနှင့်ပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ ၏ (shift + cmd + ဖျက်ပစ်ပါ) ပယ်ဖျက်ရန် (သို့) ပယ်ဖျက်ရန် option နှင့်အောက်ပါ menu ပေါ်လာလိမ့်မည် -
အမှိုက်ပုံး၏အကြောင်းအရာများကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာယခင်သော့များထပ်တူပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းအတွင်းရှိ« alt »ခလုတ်ကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ၏ (shift + alt + cmd + ဖျက်ပစ်ပါ) ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်တော့မည်သည့်အရာကိုမဆို ၀ င်ရောက်ရန် (သို့) လက်ခံရန်မလိုဘဲအမှိုက်ပုံး၏အကြောင်းအရာများကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ဤလုပ်ငန်းစဉ်၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်ဤလုပ်ငန်းတာဝန်အတွက်အတန်ငယ်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းချင်ကြဘူးသောသူတို့ထဲကတ ဦး တည်းဖြစ်လျှင်ဤ option ကိုအကြံပြုလိုတယ်။
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့သည်အမှိုက်မှဖယ်ထုတ်မထားသောဖိုင်နှင့် ဆက်၍ ပြaနာဆက်ရှိနေသေးသည် ငါတို့ Terminal ကိုသုံးနိုင်သည် အကယ်၍ command တစ်ခုမှအမှိုက်ပုံးထဲမှအကြောင်းအရာများကိုလည်းပယ်ဖျက်နိုင်လျှင်၊ ဤ command သည် -
တကယ်တော့ဒီနေ့ခေတ်မှာ OS X El Capitan နဲ့အရင် OS X Yosemite ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အမှိုက်များမှစာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်အချက်အလက်များကိုဖျက်ပစ်သည့်အခါများသောအားဖြင့်အမှားအယွင်းများများများစားစားမရှိပါဘူး။ Apple ဟာဒီအားနည်းချက်တွေကိုရှောင်ရှားနိုင်အောင်စနစ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေပါတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာဗားရှင်းအဟောင်းတွေမှာဖြစ်ခဲ့တာမှန်ပေမယ့်အခုမကြာခဏတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုသည်မှာထိုရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် Mac ပေါ်ရှိ Trash တွင်ပါဝင်သောအရာများကိုလုံခြုံစွာ ဖျက်၍ မရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Finder တွင်အမှိုက်များမရှိပဲအမှိုက်ပုံးကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလဲ
59 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ « Alt »သည်ရွေးစရာအချို့ကိုပြုပြင်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်ုပ်အတွက်တော့ဖြစ်မလာဘူးဆိုတာကိုသိရင်ဒီလှည့်ကွက်ကိုမသိဘူးဆိုတာဝန်ခံရမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
PS: တကယ်အလုပ်လုပ်သည်ဟုပြောရန်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဖိုင်တွဲများနှင့်စမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကို ဖျက်၍ မရပါ၊ ထပ်မံ၍ သော်လည်းကောင်း၊ မည်သည့်အရာမျှမဖျက်ပါ - xD
ဒီအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! တကယ်အလုပ်လုပ်တယ်
အကယ်၍ သင်အမှိုက်ပုံးထဲတွင်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုရရှိပါက - ␀␀? ␀? ␀␀.␀␀␀နှင့်၎င်းကိုဖျက်ရန်နည်းလမ်းမရှိချေ။
ခွင့်ပြုချက်ကိုပြင်ပါသို့မဟုတ်အမှိုက်ကို Onyx ဖြင့်ဖျက်ပစ်ပါ
Ignacio Espiniella ဟုသူကပြောသည်
Ignacio Espiniella အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းပြီ၊ ငါ့အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ငါ ၁% ခြွင်းချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အခွင့်ထူးတွေနဲ့ပြaနာရှိတယ်လို့ငါ့ကိုပြောတယ်။ မဆိုအကြံပြုချက်?
သင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ဖိုင် (သို့) ဖိုင်တွဲကိုညာခလုပ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်ခွင့်ပြုချက်ကိုဖတ်ပြီးရေးခြင်းရှိမရှိကြည့်ပါ။ အောက်ခြေကိုသွားပြီးအချက်အလက်များကိုရယူရန်ရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ။ သွားရန်။ ပထမ ဦး စွာ settings ကိုပြောင်းရန်နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ရန် gear ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် settings ကိုသော့ဖွင့်ပါ။ ထို့နောက်ခွင့်ပြုချက်တွင်သင်သင်ဖယ်ရှားလိုသောအသုံးပြုသူကို R&W ခွင့်ပြုချက်များပေးပြီး၎င်းကိုပြုလုပ်ပါ။ ဤအရာအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲသူအသုံးပြုသူနှင့်ပြုလုပ်ရမည်ဟုပြောစရာမလိုပါ။ အကယ်၍ ပြproblemsနာများဆက်ရှိနေသေးပါကဤဖိုင်များအားအခွင့်ထူးများမတွေ့ရပါကစာရွက်ပေါ်တွင်ပထမဆုံးကော်ပီကူးပါ။ Administrator အသုံးပြုသူနှင့် log in လုပ်ပါ။ terminal သို့သွားပြီး sudo rm -rf ကိုရိုက်ပါ။ သင်ကူးယူလိုက်သောလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ပါ။ ဖိုင်တွဲ၏အမည်နှင့်အတူတူပင်လျှင်အဆင်မပြေပါကသင်နှိပ်လိုက်သည့်အခါအဆင်ပြေသွားလျှင်၎င်းကသင်ထည့်လိုက်သော admin ၏စကားဝှက်ကိုတောင်းလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုနှာခေါင်းဖြင့်ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဟွမ်ကဲ့သို့အလွန်ထူးဆန်းသောနာမည်ရှိသောဖိုင်တစ်ဖိုင်ဖြစ်ပျက်သည်။ ကျွန်ုပ်အမှိုက်ထဲတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်ပေါ်နေသည်။ ခွင့်ပြုချက်တွေကိုပြန်ပြင်ဖို့နဲ့ OnyX နဲ့အမှိုက်ပုံးကိုဖျက်ပစ်ဖို့ငါကြိုးစားခဲ့တယ်။
မဟုတ်ဘူး။ မဟုတ်ဘူး ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ့မှာ miniMac ရှိတယ်၊ ပြောစရာစကားရှိတယ်၊ ငါ ၀ မ်းသာတယ်။ ဒါပေမယ့်အမှိုက်ပုံးကိုငါဖြိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားတိုင်းပစ္စည်းကိုကာကွယ်ထားတယ်၊ တစ်ခုခုရှိတယ်လို့စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုရခဲ့တယ်။ စုစုပေါင်းပြီးသားဖြစ်သည် ငါဒီနည်းလမ်းအပေါ်ကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘူးလို့ထင်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ထူးဆန်းသောနာမည်ဖိုင်ကိုအမှိုက်ပုံးထဲ၌ပြီးသားပါပြီ ငါအနည်းငယ်ကြမ်းတမ်းတမ်းတနေတယ်။ ငါ bootcamp disk ကိုဖျက်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့အဲ့လိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ဖိုင်က macOsX ထက် bootcamp နဲ့ပိုပြီးသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုပေးတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီအဖြေကိုခဏတာရှာဖွေနေပါတယ်။ ပြီးတော့ခင်ဗျားကကျွန်တော့်ကိုတိကျတဲ့အဖြေတစ်ခုပေးခဲ့ပြီးပြီ။
ဟယ်လို! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမှိုက်ပုံးထဲမှဖိုင်အချို့ကိုဖျက်ပစ်ရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ပါ။ သင်၏အကြံဥာဏ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်အောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် gr ထာဝရကျေးဇူးတင်ပါသည်
ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ် Snow Leopard ကိုထည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ပြhaveနာတစ်ခုရှိတယ်။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ပြfromနာကလွဲရင်တခြားရူးသွပ်ခြင်းကအခုအရူးဖြစ်နေပြီ။ 2,5 Gb ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ ၃၅ မိနစ်လောက်ကြာတယ်၊ ဒီဗားရှင်းအသစ်ကိုမတပ်ဆင်ခင်ချက်ချင်းပဲ။
Neuw Leopard ဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူဘင်ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းသည်အဝေးထိန်းစနစ်ဖြစ်လာသည်။ 2,5 Gb သည် ၃၅ မိနစ်ခန့်ကြာသည်
grax ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာသည်အသစ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သော့ခတ်ထားသောပုံဖြစ်သောကျွန်ုပ်အမှိုက်ပုံကိုအစဉ်အမြဲမမြင်လိုပါ။ ကျွန်ုပ်မဖျက်နိုင်ပါ။
မင်္ဂလာပါယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၊ အမှိုက်ပုံးကိုရှင်းလင်းခြင်း၏ပြMacနာသည်ကျွန်ုပ်၏ MacBook Pro 13 to တွင်ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ယခင် version MacBook 13¨တွင်ထူးဆန်းသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သကဲ့သို့တစ်ခုတည်းသောအရာသည်ယခင် laptop ၏ယခင် version နှင့်အတူဖြစ်သည်။ လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာတွင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အမှိုက်ပုံးထဲရှိ option key ကိုကျွန်ုပ်ပေးခဲ့သည်။ ဒေတာများကိုဖျက်ပစ်သည့်အချိန်များရှိခဲ့သည်။ Mac ကိုပိတ်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်လုပ်သည်၊ ပြန်လည်စတင်ခြင်းသည်မည်သည့်ရလဒ်မျှမရသောကြောင့်မျက်စိမပြန်ပါ။ ဒါပေမယ့်၊ Pro 13¨အသစ်နဲ့ငါ့ကိုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုမပေးပါဘူး၊ ကျွန်တော်သိတဲ့တစ်ခုတည်းသောအချက်ကတော့ကျွန်တော်ဖျက်လိုက်သောဖိုင်အချို့သည် Vista နှင့် VAIO အတွက်အရန်အဖြစ်ယခင်အသုံးပြုခဲ့သည့်ပြင်ပ 1Tb Hard မှဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမှိုက်အပြည့်ကိုမြင်ရတာကကျွန်တော့်ကိုရူးသွားပြီးဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဖိုင်တချို့မှာလုံလောက်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိဘူး !! မင်းရဲ့အကူအညီကိုမင်းစောင့်နေတယ်။
ဤတွင်တစ်ချိန်က Mac လောကနှင့်ပတ်သက်သော“ ဆွေးနွေးမှုများ” နှင့်“ တုန့်ပြန်မှုများ” အတွက်ဤအံ့သြဖွယ်ရာနေရာကိုအီရန်၊ တရုတ်စသည့်ရေကြောင်းသွားလာမှုကန့်သတ်ချက်များရှိသောနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်၍ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကြောင့်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူရန်လိုအပ်သည်။ BIG အပြောင်းအလဲကို MAC သို့ပြောင်းလဲလိုက်သည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ထိုနိုင်ငံများရှိအချို့သောဆိုဒ်များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အနိုင်ရရန်အတွက် Freegate, Gpass, UltraSurf စသည်တို့ရှိသော်လည်း Mac တွင်ရွေးချယ်စရာများနှင့်အချို့သော proxy များသည်ဝက်အလုပ်နှင့်တအားအလွန်လေးလံသည်။ ထို့အပြင်ငါရှောင်ရှားရန်တတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံး Paralells နှင့်ကျော်ကြားသောဝင်းကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားသည်။ သူတို့အားနှောင့်အယှက်ကူးစက်။
အံ့သြစရာ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
Jose Paz ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမှန်တရားကတကယ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်
José Paz ကိုပြန်ပြောပါ
နောက်ဆုံးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ် mac ထဲကဖိုင်များအားလုံးကိုဖျက်နိုင်ခဲ့တယ်
Alejandra Hoyos placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အချို့သောပစ္စည်းများကိုဖျက်ပစ်သည်။ အခြားသူများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီး၊ မည်သည့်အရာမျှမဖျက်နိုင်ပါ။ အမှိုက်ပုံးထဲတွင်ကျန်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုနေရာမှအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေရမည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ hard drive ၏3GB ကဲ့သို့ငါ့ကိုသိမ်းပိုက်ထားသည်။ ။ ငါ Uugh ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး .. ငါ့အမှိုက်သုတ်လို့မရဘူး!
Alejandra Hoyos အားပြန်ပြောပါ
ငါလုပ်နိုင်ပါပြီ! အမှိုက်ပုံးဟုခေါ်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ 45 GB သည်အမှိုက်မှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။
Fantastic က 100 ကျေးဇူးတင်စကားအလုပ်လုပ်ခဲ့ ....
ငါလိုအပ်သမျှရုံနှင့်မည်သည့် application ကို install မပါဘဲ! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်လိုက်သောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဖျက်ပစ်သော်လည်း၎င်းပုံသည်အမြဲတမ်းပေါ်နေသည်ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကဖိုင်တစ်ခု၏အမှိုက်ပုံးကိုမည်သို့ရှင်းလင်းရမည်ကိုသိပါသည်။ အဆိုပါမေးခွန်းကိုဖိုင်ကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ထားသောဖိုင်များဟုခေါ်သည်။
အကယ်၍ သင်ဖွင့်ပြီး "ပြန်လည်ကောင်းမွန်သောဖိုင်များ" ဟုခေါ်သောဖိုလ်ဒါတစ်ခုပေါ်လာပါကသင်၏ Mac တွင်ပိတ်ပစ်ခြင်း၊ ယာယီသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ယာယီသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်အခြားအရာများကိုရှင်းလင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြုချက်ကိုပြုပြင်နှင့် disk utility ကိုနှင့်အတူပြည်တွင်းရေး disk ကို status ကိုစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ ပြproblemနာဆက်ရှိနေသေးလျှင်သင် OS os x ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်
စာရွက်စာတမ်းများကိုအမှိုက်ပုံးထဲမှ minimac ထဲတွင်ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်
ကောင်းပါတယ် !!! ငါမဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းတစ်နှစ်နီးပါးရှိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်အချို့သော .exe များမှာသူတို့သည် mac ထဲတွင်သော့ခလောက်တစ်ခုတပ်ထားခြင်းကြောင့်မည်မျှစိတ်ဆိုးကြသနည်း။ ဤသေးငယ်သောအချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အမှားဆီပို့လိုက်တဲ့ဖိုင်တွေဖျက်လိုက်တာနဲ့ပြproblemsနာရှိခဲ့တယ်။ ဖြေရှင်းနိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကားလို့စ် Diaz Salgado ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတဲ့လှည့်ကွက်။ အဆင်ပြေတယ်။ အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Carlos Díaz Salgado သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ။ အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်မထားဘူး။ ကျွန်ုပ်တွင် MacBook 13 L Lion ပါရှိပြီး၊ ".trash" ကိုဖွင့ ်၍ မရပါ။ ၎င်းသည်အခြားလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်အရာအားရွေ့လျားခြင်းသို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်အမှိုက်ပုံးခြင်းကဲ့သို့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စစ်ဆင်ရေးပြီးဆုံးပါကထပ်မံကြိုးစားပါ။ » ငါမရှင်းနိုင်ဘူး။ မည်သူမဆိုမည်သည့်ဖြေရှင်းချက်ရှိသနည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီနေရာမှာ MacbookPro 2007, Mac OSX 10.5.8 (Leopard) နဲ့အတူ IT ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။
အဆင်ပြေတယ်!! ငါအမှိုက်ပုံးထဲကနေဖျက်ပစ်ရန်နည်းလမ်းမရှိကြောင်းနှင့်ငါ ALT နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာဖိုင်နှင့်အတူရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တွင် MacBook တစ်ခုရှိပြီးကွန်ပျူတာကိုကျွန်ုပ်ဖွင့်တိုင်းပြန်ဖွင့်တိုင်းအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းအမှိုက်တွင် RECOVER FILES ဟုခေါ်သောဖိုလ်ဒါတစ်ခုပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်မည်မျှအကြိမ်ဖျက်ပစ်ပါစေကျွန်ုပ်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်တိုင်းပြန်ပေါ်လာသည်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ ဗိုင်းရပ်စ်လား။ (Mac ကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုတာငါသိပေမဲ့ .... )
အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော့် mac နဲ့ပြaနာရှိနေတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကကူညီနိုင်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်မှာ version 10.7.2 ပါတဲ့ I'mac ရှိတယ်၊ ကျွန်ုပ်ပြproblemနာကကျွန်ုပ်၏အမှိုက်ထဲသို့ပစ်လိုက်တဲ့ဖိုင်တိုင်းထဲမှာမပါဘူး သင်ဖိုင်များပို့နေသည့်နေရာတွင်ရှာဖွေပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ရှာ။ မတွေ့ပါ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကို၎င်းကိုဖြေရှင်းနိုင်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကိုဖတ်ရှုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Jaca ၁၀၁ ဟုသူကပြောသည်
setting ထဲမှာသင်အမှိုက်ကိုဖြတ်သန်းသွားစရာမလိုဘဲဖျက်ပစ်ရန် configured လုပ်ထားပြီးပြီ။
သို့သော်ထိုဆက်တင်များကိုကျွန်ုပ်မည်သည့်နေရာတွင်တွေ့ရပါသနည်း၊ man၊ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်မိုက်မဲသော haha ​​ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုထပ်မံပြုပြင်ရန်ဘယ်နေရာကိုရှာမတွေ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ACT ထဲ၌၎င်းကိုကိုက်ပြီးပြီးပါက default သို့ပြန်သွားပါ။ ကျွန်တော့်ကိုပိုပြီးတိတိကျကျလမ်းညွှန်ပေးနိုင်တယ်၊ ပိုကောင်းလိမ့်မယ်
ဒါကြောင့် workaaa ပါဘူး !! ငါအမှိုက်ပုံးနှင့်ဘာမျှမသွန်! ငါအချည်းနှီးသောအမှိုက်dလုံခြုံစွာနှင့်ဘာမျှမတင်! တစ်ခုတည်းသောအရာက dq မှအသံအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီး၊ အမှိုက်ပုံးကိုပိတ်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်ထပ်မံဖွင့်လိုက်သောအခါ၊ စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးရှိနေဆဲဖြစ်သည် !! ငါဘာမှမဖျက်နိုင်ဘူး !! ငါအမှိုက်ကိုအကြိမ်တစ်ထောင်မှုတ်ထုတ်ပြီးအရာအားလုံးရှိနေသေးသည်။ အချိန်တိုင်းမှာသူဟာပိုပိုပြီးစုဆောင်းလာတာနဲ့အမျှဘာတစ်ခုမှဖယ်ရှားပစ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းရှာမတွေ့ပါ။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ!!
OS X operating system ရှိအမှိုက်ပုံးကိုလုံခြုံစွာဖျက်ရန်အခါ၌ပြencounteredနာများကြုံတွေ့ရသောသုံးစွဲသူအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ အမှန်တကယ်မှာ၊ ၎င်းတို့သည်သတိမထားမိကြသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကွန်ပျူတာမှဖိုင်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဖျက်သောအခါ၎င်းသည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ၎င်းသည်နေရာလွတ်ကိုထပ်မံသိမ်းဆည်းထားနိုင်သော်လည်း third-party ပရိုဂရမ်များကို အသုံးပြု၍ ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
အဆင်ပြေတယ်!!!! ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!!!
Alberto Blanco ဟုသူကပြောသည်
ထူးဆန်းသောအမည်နှင့်ကောက်နုတ်ချက်များပါသောအမှိုက်ပုံးတွင်ပေါ်လာသောဖိုင်သည်သင်၏ boot camp ၏အခန်းကန့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဖျက်ရန်သင်ပြောသောအခန်းကန့်သည်အရန်တစ်ခုဖန်တီးပြီးထပ်မံဖန်တီးခြင်းငါကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်
Alberto Blanco အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းတယ် !! ..HA! ကျက်သရေနဲ့တူအလုပ်လုပ်တယ် !!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တထောင် ;-D !!!!
သန်းတစ်ထောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... ဒီအတွက်မင်းကိုဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ရမလဲမသိဘူး ... အဲဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ငါအံ့သြသွားတယ် ... ငါကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီ။
ဂရိတ် !!! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် !!!
Amparisima ၁ ဟုသူကပြောသည်
Farachento 2001 ဟုသူကပြောသည်
ဂျော်ဂျီယာနာ အိုင်ယူရီယာ ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်မှာလုံလောက်ပြီ .. ၁၀၀၀၀ လောက် ၀ ယ်သည်။ ဟက်ဟက်ဟားမားဝယ်တယ် IT အလုပ်လုပ်တယ်
Georgiana Iurea အားစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်တွင်အမှိုက်ပုံးအတွင်းဖိုင်ပေါင်း ၉၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ငါဖျက်ပစ်ရန်ကြိုးစားသောအခါအမှိုက်ပုံးကိုအလွန်နှေးကွေးစေသည် (၎င်းသည်ဖျက်ရန်လိုသည့်ဖိုင်အရေအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်) ။ တစ်နာရီခန့်အကြာတွင်၊ ၎င်းကိုငါရပ်တန့်လိုက်သည်။ အမှိုက်ကိုလျင်မြန်စွာသွန်ရန်နည်းလမ်း သုံးရက်ပတ်လုံးအမှိုက်ပုံးကိုရှင်းလင်းခြင်းအဆင့် ...
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!! ဒါဟာအလုပ်လုပ်ခဲ့ !!! 🙂
mullet, ကောင်းသောည၊ ကျွန်ုပ်၏အမှိုက်ပုံးကို Mac ပေါ်တွင်မသွန်နိုင်ပါ။ သင်မည်သို့လုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ် maaramos@gmail.com ကျွန်တော့်နာမည်ကမာတင်ရာမို့စ်
Martin Ramos ကိုပြန်ပြောပါ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ အမှိုက်ပုံးနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်ပြသနာမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အမှိုက်ထဲသို့ဝင်သောအခါ၎င်းသည်အလွန်လေးလံသောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဖျက်လိုသောအခါပေါ်လာသည် - Time Machine သို့မဟုတ်အခြားပရိုဂရမ်တစ်ခုမှအရန်ကူးခြင်း။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အားထင်မြင်မိပြီးကျွန်ုပ်အားအားလုံးကိုဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်ပေးသည်။ သို့သော်၎င်းကိုစတင်ဖျက်သိမ်းသည့်အခါ ၅ စက္ကန့်အကြာတွင်မည်သည့်အရာကိုမဆိုမဖျက်ဘဲရပ်ပစ်သည်။ ဇာတ်ကောင်တချို့ကမှန်ကန်တဲ့အရာလို့ပြောပြီးငါ့ရဲ့ 5gb ပမာဏကိုဖျက်ပစ်နိုင်တယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
Enrique Fortunato ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကောင်းမွန်သောရှင်းပြချက်နှင့်အကြောင်းပြချက်၊ ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိသောစက်မှုနှင့်တောင့်တင်းသော discs များ၌ကျွန်ုပ်တွင်တင်းကျပ်သော disc ပါ ၀ င်သည့် mini တစ်ခုရှိပြီးထို option ကိုကျွန်ုပ်လိုချင်သည်။ Finder တွင်အမှိုက်များကို xx ရက်များအတွင်းအလိုအလျောက်ဖယ်ရှားနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေကိုယခုငါမတွေ့ပါ။ အဲဒါကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်မလား? မင်္ဂလာပါ
Enrique Fortunato အားပြန်ပြောပါ
ငါ Mac ကိုဖွင့်တဲ့အခါအမှိုက်ထဲမှာဖိုင်တွေအမြဲတမ်းငါရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါပိတ်လိုက်တဲ့အခါငါအမြဲတမ်းဗလာချန်ထားခဲ့ရတယ်။ အဲဒီဖိုင်တွေကို "တစ်ယောက်တည်း" ထားသလိုမျိုးငါသူတို့ကိုတောင်ခွဲခြားသတ်မှတ်လို့မရဘူး။ ၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောအရာဖြစ်နိုင်ပါသလား။ အဲဒါကို fix ဖို့မဆိုအကွံဉာဏျ? အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကွန်ပြူတာကိုကျွန်တော်စဖွင့်တဲ့အခါမှာအမှိုက်ပုံးထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာရတာစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်၊ ?
VLC သည် Apple TV အသစ်အတွက်၎င်း၏ beta testers များကိုရှာဖွေသည်
သင်၏ TV မီဒီယာပလေယာအား Infuse ပြုလုပ်ရန် FireCore ကအတည်ပြုသည်